Famandrihana Samsung Galaxy S8 any Korea Atsimo dia manao tantara | Vaovao momba ny gadget
El Samsung Galaxy S8 Hiditra an-tsena amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny andro vitsivitsy, taorian'ny nanehoany ny 29 martsa. Nosokafana ny famandrihana ora vitsy taorian'ny nanolorana azy ary amin'izao fotoana izao dia efa nanao tantara mahatratra ny Famandrihana 550.000 any Korea Atsimo, tanindrazany, tao anatin'ny roa andro monja.
Ary io dia rehefa nianarantsika tamin'ny tanan'i Samsung, ny Galaxy S8 vaovao dia nahatratra ny famandrihana marobe teo anelanelan'ny 7 sy 8 aprily. Ity tarehimarika ity, ohatra, dia nihoatra lavitra ny zava-bitan'ny Galaxy S7 na ny Galaxy Note 7.
Azontsika atao koa ny manamarina izany ny fipoahana sy ny olan'ny Galaxy Note 7, izay niafara tamin'ny fanesorana azy tamin'ny tsena, dia tsy misy fiatraikany amin'ny Galaxy S8 izay naharesy lahatra be ny mpampiasa, amin'izao fotoana izao avy any Korea Atsimo, na dia matahotra aza izahay fa hiafara amin'ny fandresen-dahatra ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao izany.
Hatramin'izao, ny firaketana ny famandrihan-toerana dia notazonin'ny Galaxy Note 7 izay nahatratra 400.000 ny famandrihana, na dia tsy tao anatin'ny roa andro monja aza. Ny firaketana manaraka izay tsy maintsy tadiavin'ny Galaxy S8 dia ny singa 49 tapitrisa amidin'ny Galaxy S7, izay atahoranay dia horavana tsy ho ela raha raisinay ny isan'ny famandrihana mahavariana tratra tao anatin'ny roa andro monja.
Raha ny firenentsika dia tsy mbola nihoatra ny tarehimarika amin'izao fotoana izao, fa raha te hitahiry ny Galaxy S8 vaovao ianao, mba handraisana azy amin'ny 20 aprily ho avy izao, azonao atao izany amin'ny Amazon HERE.
Mihevitra ve ianao fa ny Samsung Galaxy S8 dia fahombiazana mbola tsy nisy toa azy?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny famandrihana Samsung Galaxy S8 any Korea Atsimo dia manao tantara
Ofisialy: ny Xiaomi Mi6 dia havoaka amin'ny 19 aprily